के तपाईको बाथरुम सुन्दर पनि छ? | आफ्नैबारी
Published on : September 10, 2019 September 10, 2019 by आफ्नैबारी
तपाईले बाथरुम बनाउदै महंगा टायल र अरु फर्निसिङमा लाखौ खर्च गरी सक्नुभएको छ। धारा बेसीन, कमोड र नुहाउने सुबिधाका लागि हजारौ हजार खर्च भैसकेको छ। तर अझै पनि तपाईको बाथरुम आकर्षक लागेको छैन? सायद सुबिधा सम्पन्न तपाईको बाथरुममा सुन्दर बिरुवा नभएर पो हो की!
बाथरुममा हुर्काउन खास बिरुवालाई छनौट गर्न सकिन्छ। ति बिरुवा हुर्काउन प्रयोग गरिने गमला पनि आकर्षक छनौट गर्न सकिन्छ। गमलाको रंग कोठा सुहाउने गरि छनौट गर्न सकिन्छ। कम प्रकासमा पनि राम्रो हुर्कने, ज्यादा ठुलो नहुने र नियमित बृद्धि सुस्त हुने बिरुवा छनौट गरेर बाथरुममा हुर्काउन सकिन्छ। यस्तो बिरुवा छनौट गर्दा पात लामो समयसम्म रहने बिरुवाको छनौट गर्नु पर्दछ।
स्नेक प्लान्ट, एलोभेरा, पिसलीली, अर्किड, स्लाईकोमिन, अफ्रिकन भ्वायलेट्स जस्तो फूलहरु बाथरुमा सजिलै रमाउछन। स्पाईडर प्लान्ट, ब्यामबो, कास्ट आईरन प्लान्ट, ईभी र एजेलिया पनि कम प्रकास हुने ठाउमा राम्रो नै हुन्छन।
बाथरुमको डिजाईन गर्दा टावेल, कपडा, सरसफाईका सामान, क्रिम जस्ता सामान राख्ने ठाउ बनाईन्छ। यसरी साना र ठुला र्याक बनाउदा फूल राख्नको लागि स्ट्याण्ड बनाउनु पर्दछ। फूलको गमला राख्न र्याक वा होल्डर पनि बनाउन सकिन्छ। यसरी होल्डर बनाउदा साबुन, क्रिम वा पानीको छिटा नपर्ने भित्ताको एरिया रोजेर गर्नुपर्दछ। नियमित पानी परिरह्यो भने बिरुवालाई नराम्रो बनाउनछ र बेफाईदा पनि गर्दछ।
गमला राख्ने स्ट्याण्ड बनाउदा पनि आकर्षक हुनेगरी डिजाईन गर्नु पर्दछ।
बाथरुमामा बिरुवा हुर्काउन कस्तो गमला राम्रो?
कस्तो गमलामा के बिरुवा हुर्काउने भन्नेकुरा तपाईको बाथरुमको आकार र स्टाईलमा भर पर्छ। वाथरुममा प्रायः सेता रंगका सेरामिक गमलामा बिरुवा हुर्काइको पाईन्छ। कोठाको रंग अनुसार पहेंलो र खरानी रंगका गमला पनि प्रयोग भएका देखिन्छन।
सेरामिक गमलाको फिनिसिङ र प्याट्रर्न बाथरुमको टायलसंग मिल्ने भएकाले यसो गरिएको हुनुपर्छ। सेरामिक गमलालाई टेवुल वा स्ट्यान्डमा वा होल्डरमा राख्नु पर्दछ। सेरामिक गमला भित्तामा फिक्स गर्दा खस्ने र फुटने डर पनि उत्तिकै हुन्छ। यस्ता गमलालाई भित्तामा काँटिले पनि फिक्सगर्ने गाह्रो हुन्छ।
महँगो हुने र बाथरुमामा सजाउन पनि थप टेबुल र स्ट्याण्ड चाहिने हुनाले सेरामिक गमलाको बिकल्पमा प्लास्टिकका गमला पनि प्रयोग गर्ने चलन छ। प्लाटिकका गमलाको फाईदा भनेको सस्तो, हलुंगो र बिभिन्न डिजाईनमा पाईनु नै हो। प्लास्टिकको गमला चिल्लो र म्याट फील दिने खाले दुबै पाईन्छ। यस्ता गमला बिभिन्न डिजाईनमा पनि पाईन्छन। प्लास्टिकबाट बनेका गमला ह्याङ्ग गर्ने, भित्तामा टासने र टेबुलमा राख्ने सबैखाले मोडेलमा पाईन्छ।
कतिपय बाथरुममा काठका गमला पनि प्रयोग गरिएको पाईन्छ। चारपाटे गमला पनि बाथरुममा राम्रा देखिन्छन। काठका गमला टेबुलमा राख्न र भित्तामा टसाएर बिरुवा हुर्काउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्याट्रर्न र टेक्सचर मनपराउनेहरुले यस्ता गमला रोजेको पाईन्छ। यस्ता गमलामा हेन्डमेड स्टाईल पनि झल्किने हुँदा प्राय लोकप्रिय भैरहेको पाईन्छ। काठका गमलामा पानी रसाउने समस्या हुने भएकाले भित्री रुपमा प्लास्टिकका गमला प्रयोग गर्नु पर्ने हुनसक्छ।
काठमाण्डौमा माटोको गमला प्रयोग गर्ने चलन छ। राम्रोसंग पाकेका गमला भए तिनीहरुलाई पनि बाथरुममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपाली कला र डिजाईन झल्किने हुँदा यस्ता गमलाले पनि तपाईको बाथरुमको शोभा बढाउछन। तर गमला फुट्ने र पानीका कारण गमलाबाट नियमित फोहोर आउने भयो भने बाथरुम फोहोर हुने समस्या हुन्छ।
जुनसुकै प्रकारको गमला प्रयोग गरेपनि त्यसको तलको भागमा (गमला राख्न) त्यसलाई सुहाउने प्लेट वा कुनै खाले बेस राख्नु पर्दछ।
माटो कस्तो राख्ने?
बाथरुमको गमलामा हुर्काउने बिरुवाको लागि खेतबारीको सामान्य माटो भन्दा कम फोहोर हुने माटो (पटिङ मिडिया) प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ। यिनिहरु माटो जस्तो कडा र गरुङ्गो हुदैनन। पानी सोसेर राख्छन र चाहिएको बेला बिरुवालाई पानीको सप्लाई गर्ने प्रभावकारी काम गर्दछन। बाथरुममा प्रयोग गरिने गमलामा कोकोपिट, पर्लाईट, भर्मी कम्पोष्ट र पिटमोस जस्ता चिजहरु मिसाएर बिरुवाको लागी बिषेश माटो तयार पार्न सकिन्छ।
गमलामा पानीको मात्रा र समयः
गमलामा पानी कति सिँचाई गर्ने भन्ने कुरा तपाईले आफैं आँकलन गर्नु पर्छ। प्रायः ईनडोर प्लान्टहरुलाई धेरै पानी चाहिदैन। सिधै घाम वा हावा नलाग्ने हुदा वाथरुममा रहेको गमलामा पानीको मात्र चाडै घटेर पनि जाँदैन। त्यसैले कति दिनमा पानी प्रदान गर्ने भन्ने कुरा तय गर्नु अघि बिरुवा र गमलामा रहेको चिस्यानको अबस्था हेर्नु पर्छ।
गमलामा एकैपटक धेरै पानी सिँचाई गर्नु राम्रो मानिदैन। यसो गर्दा माटोमा चिसोपना ज्यादा हुने हुँदा बिरुवालाई नोक्सानी हुन्छ। गमलामा पानी धेरै पानी हुन गयो भने पानी चुहिन्छ जुन बाथरुममा पोखिन्छ र बाथरुमको फ्लोर चिसो हुने मात्र हैन दुर्गन्धित हुने पनि हुन सक्छ।
ईनडोर हरियाली, नयाँ र ताजा
पोहोर सालको संझना
मल बनाउने सजिलो तरिका यस्तो छ…
Previous Previous post: हावा सफा गर्ने ५ विरुवा
Next Next post: करेसाखेती गर्न कत्रो ठाँउ चाहिन्छ?